Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo xallinaya Khilaafka Kuxigeennadiisa iyo Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa muujiyey inuu doonayo inuu xalliyo khilaafka u dhaxeeya Kuxigeennadiisa iyo Xubnaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka. Kadib kulan socday shalay illaa xalay, oo u dhaxeeyey Guddoomiyaha iyo Guddiga Maaliyadda, ayuu Mudane Mursal sheegay inuu Kuxigeennadiisa la wadaagi doonno muhiimadda uu Guddigu u leeyahay shaqooyin waqtigaaan gaba-gabada ah taagan, oo Golaha u yaala.
“Waad ku mahadsan tihiin sida aad u aqbasheen una soo xaadirteen kulankan deg dega ah ee aan isugu kiin yeeray, ujeedkuna waxa uu ahaa inaan dhageysto talooyinkiina, waxaana la soo tashan doonaa Guddoomiye Kuxigeennada Golaha Shacabka” ayuu yiri Guddoomiye Mursal, sida uu baahiyey Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabka.
Hadalkaas ayuu sheegay Guddoomiye Mursal wax yar kadib markii uu soo dhameeyey dhageysiga Xubno ka tirsan Guddiga Maaliyadda, oo la wadaagay shaqooyinka muhiimka ah ee hadda u yaala Guddiga, taas oo ay ka mid ah Xisaab Xirka Miisaaniyadda 2018-ka iyo ka shaqeynta Meel-marinta Miisaaniyadda 2019-ka, waxa uuna Guddoomiyaha Goluhu sheegay inuu dareemay muhiimaddaas.
Shalay ayaa Xildhibaan Cali Jowhar, oo ka tirsan Golaha Shacabka, waxa uu Kalfadhi u sheegay iney Guddoonka Golaha Shacabku wali isku hayaan arrinta Guddiga Maaliyadda, oo ay labada Kuxigeen aaminsanaayeen iney kala direen, Guddoomiyuhuna u fasaxay inuu shaqeeyo. “Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Kuxigeennadiisa si sax ah uguma hishiis sida laga yeelaayo Guddiga Maaliyadda” ayuu Xildhibaan Cali Jowhar ku yiri Kalfadhi.
Iyada oo ay dhamaadka sanadka ka harsan tahay todobaad oo kaliya ayaan wali la xirin Miisaaniyadda 2018-ka, lana ansixin Miisaaniyadda 2019-ka, taas halis ku ah shaqada dhamaan hay’adaha dowladda, waana tan ay Guddoomiye Mursal iyo Guddiga Maaliyaddu ka wada hadleen shalay.
Xildhibaanno KGS ka tirsan oo ka digaya in Xukumadda Cusub lagu soo daro Wasiirradii hore